संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी उपकुलपतिको विरोधमा - Naya Patrika
संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी उपकुलपतिको विरोधमा
दाङ, २८ असार | असार २८, २०७५
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले आफ्नै गलत प्रवृत्तिका कारण नै त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्किनुपरेको बताएका छन् । विश्व संस्कृत सम्मेलनका लागि क्यानडा जाने क्रममा गलत व्यवहार देखाएको भन्दै पदाधिकारीले उपकुलपति कोइरालाको आलोचना गरेका हुन् । प्राज्ञिक व्यक्तिले नै ऐन–नियम मिचेर मनपरी गर्ने र कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर विश्वविद्यालयकै बदनाम गरेको पदाधिकारीको आरोप छ ।
विगतदेखि नै विश्वविद्यालयमा मनपरी गर्दै आएका उपकुलपति कोइरालाले क्यानडा जाने क्रममा पनि ऐनविपरीत काम गरेको पदाधिकारीहरूले जनाएका छन् । दाङको घोराहीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकाल, पूर्वशिक्षाध्यक्ष तथा प्राध्यापक भागवतप्रसाद शर्मा, आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन सञ्जय पोखरेल, विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेलगायत कर्मचारीले उपकुलपति कोइरालाको आलोचना गरेका हुन् ।
उपकुलपति कोइरालाले कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दिँदै आएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले विश्वविद्यालयको बदनाम गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
सरकारी कदम उचित
उपकुलपतिलाई नियमविपरीत क्यानडा जान नदिएर सरकारले उचित कदम चालेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘नियम–कानुन बुझेका प्राज्ञिक व्यक्तिले जबर्जस्ती गर्न खोज्नु अशोभनीय काम हो,’ शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकालले भने, ‘नियमविपरीत विदेश भ्रमणमा जान खोज्ने व्यक्तिलाई सरकारले रोक्नुलाई उचित कदमका रूपमा लिएको छु ।’
सञ्चारमाध्यममा आएका उपकुलपतिका अभिव्यक्ति पनि संस्थाको अनुशासनभन्दा बाहिर रहेको उनले बताए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएदेखि नै उपकुलपति कोइरालाले नियमविपरीत काम गर्दै आएको आरोपसमेत अन्य पदाधिकारीले लगाएका छन् ।
कोइरालाको राजीनामा माग
यसैबीच संस्कृत विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठनले उपकुलपति कोइरालाको राजीनामा माग गरेका छन् । नियमविपरीत क्यानडा जान खोज्नुले उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन् । उपकुलपति आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने काममा मात्र केन्द्रित रहेकाले राजीनामा माग्नुपरेको अनेरास्ववियु जनता विद्यापीठका इन्चार्ज सर्जन परियारले बताए । नेकपानिकट अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियुले उपकुलपतिको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
अपराधीलाई जस्तो गरियो
प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइराला, उपकुलपति
विश्व संस्कृत सम्मेलनमा जान मैले १५ असारमै सहकुलपतिमार्फत बिदा दर्ता गरेको थिएँ । पहिले विदेश भ्रमणमा जाँदा सहकुलपतिकोमा दर्ता गरेर जाने र बिदा स्वीकृत हुन्थ्यो । मेरो हकमा मात्र नभएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि यस्तै प्रक्रिया हुन्छ । यसैगरी म कैयौँपटक विदेश गएको छु । १५ गते दर्ता गरेको निवेदनमा अहिलेसम्म किन कारबाही भएन ? सम्मेलनमा जान एयरपोर्ट पुग्दा मलाई अपराधीलाई जस्तो गरी बालुवाटार लगेर कोठामा राखे । प्लेन उडेपछि प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुभयो भनेर पठाइयो । उहाँहरूको लक्ष्य मलाई सम्मेलनमा जान नदिने रहेछ । पढे–लेखेको मान्छेलाई बालुवाटारमा ल्याएर प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो त्यो निकै अपमान हो ।